Waxaan si qoto dheer u falanqeyneynaa Samsung Galaxy S20 5G cusub | War gadget
Samsung waxay dhawaan suuqa ka bilawday seddex nooc oo kala ah Galaxy S20, sidaa darteed waxaan heysanay Galaxy S20 5G cusub, Galaxy S20 Pro iyo Galaxy S20 Ultra. Kuwani waa boosteejooyinka ay Samsung rabto inay ku sii wado inay ahaato mid ka mid ah beddelka ugu weyn ee suuqa casriga casriga ah ee Android. Markan waxaan helnay Galaxy S20 5G waanan tijaabinay si aad si qoto dheer u ogaatid dhammaan faahfaahinta terminalkan is haysta oo leh naqshad aan caadi ahayn. Nala joog oo soo hel falanqaynta qotada dheer ee Samsung Galaxy S20 5G cusub iyo waxkasta oo ay awoodo inay bixiso, intaa waxaa sii dheer, waxaan tijaabinay kamaradeeda sedexda ah.
1 Naqshadeynta iyo agabka: Erayga daawashada Samsung
2 Xogta taxanaha 'Galaxy S20'
3 Awooda iyo isku xirnaanta: Waxba kama maqna
4 Imtixaanada kamaradda
5 Qeybta warbaahinta badan: shaashadda iyo dhawaqa
6 Automoomi iyo dareenka sawirka shaashadda
Naqshadeynta iyo agabka: Erayga daawashada Samsung
Waxaan leenahay terminal taas oo ah isbeddel xiiso leh oo ka yimid qaabkii hore. Sidaad u aragtayba, way ka yara ballaadhan tahay oo way ka dheer tahay, taasi waa, shaashadda hadda waa mid aad u ballaadhan oo leh saamiga 20: 9 iyo ujeedadayda waa guul xiiso leh. Sababtaas awgeed waxaa noo haray cabirro gaaraya 151,7 x 69,1 x 7,9mm.
Cabbir: 151,7 x 69,1 x 7,9mm
Miisaanka: Gram 163
Kaaliyaha shaashadda ayaa lagu daray qalabka
Miisaanka iyo ergonomicsku wax badan bay ku leeyihiin halkan, halkaasoo Samsung ay isu muujisay inay shaqo fiican qabato. TWaxaan haynaa 163 garaam oo dareemaya iftiin, gaar ahaan mahadnaqa qalooca labalaabka ah (gadaal iyo hore). Sidii aan filaynay waxaan uxirnay biraha geesaha, dhammaan badhamada dhinaca midig iyo hal dekedo USB-C ah oo xagga dambe ah, waxaan aakhirkii haysannaa Jack 3,5mm.
Kaydinta Gudaha 128GB UFS 3.0 128 / 512 GB UFS 3.0 128 / 512 GB UFS 3.0
Isku xirnaanta 5G. Bluetooth 5.0. Wi-Fi 6.USB-C 5G. Bluetooth 5.0. Wi-Fi 6.USB-C 5G. Bluetooth 5.0. Wi-Fi 6.USB-C
Iibso Samsung Galaxy S20
Awooda iyo isku xirnaanta: Waxba kama maqna
Heer farsamo waxaan leenahay Exynos 990 oo ay soo saartay Samsung 7nm taasoo aragti ahaan bixisa awood koronto yar. Ku raaciyo cutubka la tijaabiyay 12GB oo RAM ah iyo 128GB oo keyd ah oo lagu ballaarin karo kaarka microSD (dualSIM farsamo). Waxaas oo dhan waxay la socdaan Android 10 hoosta lakabka habeynta OneUI oo si habsami leh u socda Waxaan awoodnay inaan ku hubino waxqabadka tayada ugu sareysa ciyaaraha sida PUBG mana aanan helin wax diidmo ah ama hoos udhaca FPS, xaqiiqdii heerka awooda Galaxy S20 5G ma lahan wax caqabad ah.
Samsung waxay si buuxda u dooratay isku xirnaanta waxayna ku xaqiijineysaa iyada oo leh Tiknoolajiyadda 5G oo lagu daray heer ahaan xitaa qaabka soo gelitaanka. Laakiin wax walbaa sidaas kuma sii ahaanayaan, waxaan leenahay xiriir WiFi 6 MIMO 4 × 4 iyo LTE qaybta 20, Xaqiiqdii Galaxy S20 wuxuu awood u yeelan doonaa inuu ka faa'iideysto tiknoolajiyaddii ugu dambeysay ee isgaarsiinta iyo xiriirka wireless. Waxqabadka WiFi iyo LTE wuxuu ku fiicnaaday tijaabooyinkayaga, iyada oo aanu jirin wax xidhiidh ah oo lumay iyo kala duwanaansho heer sare ah. Wax isku mid ah kama dhihi karno 5G, maadaama shirkaddeena taleefanku aysan taageersaneyn tiknoolajiyadda aan soo sheegnay, sidaa darteed baaritaannadii lama dhameystiri karin.
Dhabarka dambe waxaan ka heleynaa kamaradda halka aan haysano:
Xagasha Wide Ultra: 12MP 1,4nm iyo f / 2.2
Xagal: 12MP 1,8nm iyo f / 1.8 oo leh OIS
Telephoto: 64MP, 0,8nm iyo f / 2.0 oo wata OIS
Moodle: Isugeynta indhaha illaa 3x iyo dijital illaa 30x
Waxaan haysannaa dareemayaal ToF ah, kaas oo laga heli karo labada nooc ee waaweyn ee qalabka, waxaan kuu daynaynaa qaar ka mid ah tijaabooyinka sawirrada laga qaaday:
Gudaha habeenkii toogasho
Gudaha lagu toogtay
Waan arki karnaa sida sawirrada leh dareemaha ugu weyn ay yihiine waxaa loo qaadaa heer ahaan xalka ka hooseeya 64MP In kasta oo aan dooran karno tallaalka qaybtaan, haa, waan ka noqon doonnaa qaabka 16: 9. Sawir-qaadashada maalinlaha ah si fiican ayey u kala-duwan tahay, midabbada si wanaagsan ayey u doorataa, waxayna ka dhex muuqataa iftiinka dambe. Tayada sawirku hoos ayey u dhacdaa iyadoo iftiinka maalinnimo dhacayo, gaar ahaan dareemayaasha 12MP (Wide Angle and Angular), in kasta oo ay xaqiiqda tahay in Samsung ilaa maanta ay ahayd horyaalkii habaynki, haddana waxaan ogaanay inay si fiican isku difaacayso gudaha, laakiin waxay la dhibaataysan tahay markay wajahayso nalal macmal ah qaarkood. Waqtiga duubista waxaan haynaa ikhtiyaarka lagu doorto xalka 8K (qiyaastii 600MB daqiiqad kasta), laakiin sida caadiga ah waxaan dhaqaajinay xallinta FullHD oo bixisa xasillooni lagu qanco, marka lagu daro 8K nama ogolaanayo inaan ka badnaanno 24 FPS duubista.
Kaamirada hore waxaan heysanaa natiijo wanaagsan oo leh 10MP kamaraddeeda, marka lagu daro ikhtiyaarka ah in loo oggolaado sawir caadi ah ama la doorto sawir xagal ah halkaasoo waxyaabo badan ay ku habboon yihiin. Waxay bixisaa taxaneyaal miirayaal ah iyo u-habeynno sii wadaya inay sababaan dareen ka dhex dhaca kuwa ugu yar.
Wixii ku saabsan arjiga, Samsung waxay sii wadaa inay ogaato sida loo qanciyo dadweynaha ugu baahida badan iyo kuwa ugu caansan. Way fududahay in la isticmaalo oo kala-guurka u dhexeeya dareemayaal kala duwan ayaa leh animation aad u fiican, Marka, dalabku weli waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee waddaniga ah marka ay timaaddo qabashada sawir iyo fiidiyow.
Qeybta warbaahinta badan: shaashadda iyo dhawaqa
Haddii ay jiraan wax Samsung si gaar ah ugu fiican yahay, waa si sax ah in loogu doodo xayndaabyo tayo sare leh, waana sababtaas sababta inta badan shirkadaha wax soo saara ay doortaan. Sida ay tahay, waxaan ka helnaa guddi deeqsi ah 6,2 inji Dynamic Amoled oo bixiya qaraarka QHD + iyo ilaa heerka cusbooneysiinta 120 Hz.
Nasiib darrose waa inaan doorannaa xalka ugu sarreeya (QHD +) ama heerka ugu sarreeya ee cusbooneysiinta (120 Hz) maxaa yeelay labada goobba isku mar looma adeegsan karo. Xaaladdeenna, waxaan si xaqiiqo ah u doorannay xallinta FHD + iyo heerka cusbooneysiinta 120 Hz ee isticmaalka maalin kasta. Si kastaba ha noqotee, waxaan ka helnaa hagaajin wanaagsan oo ka soo horjeedka iyo dhererka midabada, iyo sidoo kale iftiin wanaagsan oo ka dhigaya wax lagu farxo in dibedda lagu isticmaalo, oo leh madow aad u saafi ah. Waxaan haynaa qaab 20: 9 ah oo noo oggolaanaya inaan u isticmaalno waxyaabaha ku jira hab wanaagsan, xarig cufan oo isku dhafan oo ah halka ay ku taal kamaradda sawirku ku yaal iyo looxyada aadka u yar yar, sida "qalooca" caanka ah ee dhinacyada, oo inyar yaraaday oo aniga ila muuqda mid ka mid ah guulaha ugu waaweyn ee qarnigan, aberiyada chromatic ku dhowaad gebi ahaanba way baaba'ayaan.
Dhanka dhawaaqa, waxaan ku leenahay salka hoose oo sameecad gadaashiisa shaashadda dusha sare, labadaba isla waqtigaas waxay bixiyaan nooc ka mid ah codka istiinada oo ku filan in la cuno waxa ku jira, Ma aanan helin abergin ama qasacad xitaa xitaa heer sare. Samsung waxay sii wadaa inay inta kale ku tuurto qaybtaan waana shaki la’aan waa mid kamid ah dhinacyada ugu wanaagsan ee aan helnay inta lagu gudajiray tijaabooyinka xarunta.
Automoomi iyo dareenka sawirka shaashadda
Waxaan ku bilaabaynaa ismaamul, waxaan leenahay 4.000 Mah iyo xawaareyn degdeg ah oo illaa 25W ah oo loo maro dekedda USB-C, halka aan sidoo kale yeelan karno cdhakhso u dalaca Qi wireless ilaa 15W. Batariga ayaa shaki la’aan kamid ah qodobada keena shaki badan iyo Ma awoodno inaan isku tuujinno wax ka badan 4h30m oo shaashad iyadoo la adeegsanayo isku dhafan. Waa ku filan tahay isticmaalka maalinlaha ah, laakiin waxaan seegnay lacag degdeg ah oo aad u xoog badan ama is-maamul-yar oo dheeraad ah. Iyada oo ay taasi jirto, batteriga ayaa koray marka loo eego qaabkii hore.
Heerka furitaanka biometric-ka, Samsung mar kale waxay dooraneysaa dareeraha faraha ee shaashadda iyo aqoonsiga wajiga iyadoo loo marayo kamaradda sawir-qaadaha. Waxaan leenahay aqoonsi wajiga ah oo aalaaba aan dhicin, waa mid si fiican u yaal isla markaana na siiyay dareen ah inaan nabad qabno. Si kastaba ha noqotee, mar kale Samsung waxay ku qasbeysaa animationka furitaanka kaas oo wax yar ka dhakhso badan si loo siiyo dareere dareere badan. Marka laga hadlayo aqoonsiga wajiga, way iska difaacdaa xaaladaha badankood waxayna xitaa ka dheereeysaa dareeraha sawirka faraha mararka qaar.
Waxaan ku bilaabayaa soo koobidkeyga kan wanaagsan: Waxaan ka helay tayada dhammaystirka iyo qaabka guusha ee terminalka, raaxo leh, is haysta iyo iftiinka. Waxaa loo hayaa inay tahay bedelkeyga ugu fiican marka la eego qaadista. Waxaan sidoo kale jeclaaday qaybta multimedia-ka, halkaasoo Samsung sida caadiga ah ay ka sarreyso dhammaan tartamayaasha, oo leh shaashad tayo sare leh iyo dhawaq u dhigma.
Naqshad ergonomic ah oo qumman oo qalab tayo leh leh
Awood casri ah iyo isku xirnaan, waxba uma maqna
Qeyb warbaahin heer sare ah oo shaashadda iyo codka ah
Dhinaca kale, Kaamiradu waxay iga tagtay qabow, taas oo aan ka filanayay wax aad u badan iyada oo la tixgelinayo qiimaha terminalka. Sidoo kale ma aanan jeclayn xaddidaadda software-ka sida inaan kala doorto FHD 120Hz ama QHD + 60Hz.
Madax-bannaanidu waxay ku xanuunsan kartaa isticmaalka degdegga ah
Xaddidaadyada software ee ku saabsan shaashadda shaashadda
Kaamiradu wali waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican, laakiin wax badan ayaan filayay
Waxaan maanta wajaheynaa mid ka mid ah boosteejooyinka ugu fiican suuqa, in waxaad ka iibsan kartaa 1009 euro boggeeda rasmiga ah ama goobaha lagu kalsoon yahay sida Amazon.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Waxaan si qoto dheer u eegeynaa Samsung Galaxy S20 5G cusub